A na-atụ anya mbelata ihe ruru ogo 9 na Spain | Network Meteorology
Na-agafe agafe na-ekpo ọkụ? Eziokwu bu Anyị enweela mmalite mmalite nke kpụ ọkụ n'ọnụ karịa ka ọ dị na mbụ, nke nwere oke okpomọkụ na-eburu n'uche ọnwa nke anyị: 43,1 ogo centigrade debara aha na Granada n'ụbọchị 6, 38'4ºC na 5th na Ibiza ma ọ bụ the 45,4ºC na ọdụ ụgbọ elu Córdoba na 5th.
Mana ọnọdụ a ga-agbanwe dịka taa bụ Fraide. N'ezie, a na-atụ anya na okpomọkụ ga-agbadata 9 ogo na ngwụsị izu, nke ga-enyere anyị aka iche na ọdịda dị nso n'akụkụ.
Modesto Sánchez, ọnụ na-ekwuchitere thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na Steeti, kọwara na n'oge Satọdee na Sọnde anyị ga-ebi ndụ »ijeoma ndaeyo»,, N’agbanyeghi n’ubọchi ikpeazu nke izu a ga - enwe obere nlọghachi na okpomọkụ.
Na Tuesday 13, a na-atụ anya izugbe, na enweghi nsogbu n’ime ikuku nke ghapuru anyi mmiri ozuzo na igwe ojii n’elu otutu obodo, mmiri nke obi abụọ adịghị ya na a ga-anakwere nke ọma n’obodo ndị ahụ oké mmiri ozuzo na-adịtụbeghị, dị ka Catalonia, Balearic Islands, ma ọ bụ Madrid.
Ndị a bụ amụma nke AKEMKỌ maka ụbọchị ole na ole sochirinụ:
1 Amụma maka Fraịdee, Septemba 9
2 Amụma maka Saturday, September 10
3 Amụma maka Sọnde, Septemba 11
Amụma maka Fraịdee, Septemba 9
Taa, a na-atụ anya oge igwe ojii nke usoro mgbanwe ụbọchị ụbọchị ọwụwa anyanwụ nke ụsọ mmiri, na-enwe ike ịsa mmiri na oké ifufe na Catalonia, n'ebe ugwu nke Aragon na ndịda nke Usoro Iberian. Okpomọkụ ga-ebelata na Pyrenees, ọkara ndịda nke peninshula na agwaetiti Canary; na ndi fọduru ha g risebili kwa ọzọ.
Amụma maka Saturday, September 10
Na Satọde ihe ga-amalite ịgbanwe na mba ahụ dum. A na-atụ anya igwe ojii na mbara igwe dị ukwuu, yana na agwaetiti abụọ ahụ. O nwere ike izo n’ebe ugwu nke Katalonia. Okpomọkụ ga-ada.
Amụma maka Sọnde, Septemba 11
N’ụbọchị Sọnde, a na-atụ anya igwe ojii n’ebe ugwu nke Galicia na ọdịda anyanwụ Oké Osimiri Cantabrian, na Pyrenees, otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ọwụwa anyanwụ nke peninshula, na na Balearic Islands, ebe enwere ike ịsa mmiri. N'ebe ndị ọzọ nke peninshula ahụ, mbara igwe ga-anọgide na-edozi ma ọ bụ na igwe ojii dị elu. NA na Canary Islands ọ nwere ike zoo na agwaetiti nke enyemaka ka ukwuu.
Oke okpomọkụ ga-abawanye na ugwu na etiti Peninsula, ebe mpaghara ndịda ha ga-ebelata.
Yabụ, ọ dịkarịrị ihe a ga-asị goodbye na summer 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Dobe ihe ruru ogo 9 iji mee ka ọkụ kwụsị